I-B&B Ca'delle Palme, Igumbi le-Amelia - Venice - I-Airbnb
I-B&B Ca'delle Palme, Igumbi le-Amelia - Venice
U-Alessio Coin - uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
I-B&B Ca'delle Palme 4 * itholakala endlini eyindlu enhle esukela ekuqaleni kwawo-1900s ezungezwe ingadi evundile. Uzothola ithuba lokuphumula engadini epholile nethule ehlobo noma ukufudumala eduze neziko. kusihlwa sasebusika. I-villa iseduze ne-Villa Grimani Morosini kanye nepaki layo, i-villa yasendulo yase-Venetian enenkundla yegalofu kanye nedamu lokubhukuda.
I-B&B Ca 'delle Palme (ebekwe esigabeni 4 * yiSifunda saseVeneto) inegumbi eliphindwe kabili elinendlu yokugezela yangaphandle yangasese kanye negumbi elinobukhulu obungama-50sqm elinendawo yokugezela yangasese. Amakamelo atholakala phezulu, igumbi ngalinye line-TV, A/C, iphephile, amanetha omiyane efasiteleni kanye ne-WIFI yamahhala.
Esitezi esiphansi uzoba negumbi lokuhlala elikhulu elineziko lapho ukudla kwasekuseni kuzonikezwa khona ngokucela. Zonke izindawo zisetshenziselwa izivakashi kuphela. Ngesicelo sinombhede wokuvakasha, ubhavu wokugeza izingane kanye nesihlalo esiphezulu esitholakalayo sabancane.
Sizokujabulela ukunikeza noma yiluphi ulwazi nokwamukela okungcono kakhulu ezivakashini zethu kuyilapho sigcina ubumfihlo bakho.